ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာရတ်-ဖိုး များ | တိုယိုတာရတ်-ဖိုးကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Root Category (88)
အထူးသီးသန့်(5)
သဘာဝဓာတ်ငွေ့(1)
A/C: Front (14)
Cassette Radio (14)
Lks 245 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota RAV4 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မ...
Black Toyota RAV4 2016 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start...
Lks 410 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota RAV4 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start.ေ...
Black Toyota RAV4 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် ACA36-5000785) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steeri...
Lks 45,000,000 ညှိနှိုင်း
ကားအလွန်သန့်ပါတယ် / 2006 model ဆိုပေမဲ့ ရုပ်ပြောင်းပါ / ဈေးနဲ့ ကား အလွန်တန်
Pearl White Toyota RAV4 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြ...
Lks 238 ညှိနှိုင်း
Black Toyota RAV4 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Pearl White Toyota RAV4 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Lks 228 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota RAV4 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Lks 223 ညှိနှိုင်း
Blue Toyota RAV4 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Lks 205 ညှိနှိုင်း
Lks 325 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota RAV4 L 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်...
Lks 225 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota RAV4 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 215 ညှိနှိုင်း
Black Toyota RAV4 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Lks 360 ညှိနှိုင်း
Red Toyota RAV4 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ...
Lks 458 ညှိနှိုင်း
Black Toyota RAV4 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Lks 27,700,000 ညှိနှိုင်း
Kyaw Kyaw Htay
Toyota ရဲ့ကားအကောင်းစာရင်းဝင် RAV4 L 2002 ဟာ 180000ကီလိုမီတာထိမောင်းနှင်ထားပြီး အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်သော ဂီယာ နဲ့ ခေတ်မှီသောကားပစ္စည်းမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ် ။ Lks 27700000 ရောင်းဈေးနဲ့...
2002 Toyota RAV4 L series
Lks 28,200,000 ညှိနှိုင်း
ဒီToyota RAV4 L series 2002 ဟာ Lks28200000 သတ်မှတ်ထားပြီး ‌မောင်းနှင်ပြီး 180000ကီလိုမီတာ၊ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်သောဂီယာ နဲ့အတူ တခြားကောင်းမွန်‌သော ကားပစ္စည်းများပါတာ‌ကြောင့် အရမ်းတန်...
Lks 243 ညှိနှိုင်း
Black Toyota RAV4 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Green Toyota RAV4 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါ...
Lks 235 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota RAV4 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Lks 280 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota RAV4 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag...
Lks 485 ညှိနှိုင်း
Future Gate Bridge Co.,Ltd
ပြည်တွင်း အိမ်စီး အစ်ယူဗီ တိုယိုတာ ရတ်ဖိုးများ
တိုယိုတာရဲ့ အစ်ယူဗီလိုင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တိုယိုတာ ရတ်ဖိုးများဟာ တိုယိုတာ ကားထုတ်လုပ်ရေးမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကားတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး အက်စ်ယူဗီလိုင်းမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့ တိုယိုတာ ဟိုင်းလတ် ဆတ်နဲ့ တိုယိုတာ လန်ခယူဇာတို့ထက်တော့ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဌင်းဟာတိုယိုတာရဲ့ ပထမဆုံး ခရောဇ့်အိုဗာ အငယ်စားထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ခရောဇ်အိုဗာဆိုတာကတော့ အစ်ယူဗီကား အမြင့်စားပုံစံနဲ့ ဟတ်ဘတ်ကားပုံစံကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကားပုံစံ တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၄ လောက်တုန်းကတည်းက ဂျပန်နဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံတွေမှာ ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုယာဉ်အမျိုးအစားကို သုံးစွဲသူတွေ ကြိုက်နှစ်သက်မဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်တဲ့ အက်စ်ယူဗီရဲ့ ကောင်းမွန်မှုများဖြစ်တဲ့ အနောက် ပစ္စည်းတင်ခန်းကို ပိုကျယ်ပေးထားခြင်း၊ ကားအမြင့်ကို တိုးမြင့်ပေးထားခြင်း၊ လေးဘီးစနစ်ကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ နှစ်ဘီးမောင်း စနစ်ကို ပြောင်းနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားခြင်း စတဲ့ အရာများဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဆီစား သက်သာတဲ့ ကွန်ပတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကုန်လုံးသော ရတ်ဖိုးကားတွေကတော့ လေးဘီးမောင်းစနစ်ပါတာကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံပေါ်မှုတည်ပြီး ပစ္စည်းရနိုင်မှုပေါ်မှုတည်ပြီး လေးဘီးစနစ်ရနိုင်မရနိုင် ကွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ ပြိုင်ဖက်များ အနေနဲ့ ဖို့ဒ် အက်စ်ကေ၊ ဆူဘရု ဖို့စတား စတဲ့ ကားတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်ပေါ်မှုတည်ပြီး ကွဲပါတယ်။ ၁၉၉၄ ကနေ ၂၀၀၅ ထိကို မီနီ အက်စ်ယူဗီကို ထုတ်ပေမဲ့ ၂၀၀၅ ကနေ နောက်ပိုင်းထိကိုတော့ ကွန်ပတ် အက်စ်ယူဗီကို ထုတ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၅ ထိထုတ်တဲ့ မော်ဒယ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဌင်းရဲ့ အင်ဂျင်ကတော့ ၁၈၀၀ စီစီနဲ့ ၂၄၀၀ စီစီထိ ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၀ စီစီမှာ ဒီဇယ်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မန်နျူးယယ်ဂီယာ (၅)ချက်၊ အော်တို (၄) ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ရတ်ဖိုးမှာ NV မော်ဒယ်က နှစ်ဘီးမောင်း စနစ်ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ NRG, GX, VX စတဲ့ မော်ဒယ်တွေက လေးဘီးမောင်းကို ရရှိပါတယ်။ ၁၈၀၀ စီစီကတော့ မြင်းကောင်ရေအား ၁၅၀ ထုတ်ပြီး ဌင်းမှာတော့ ၂ ဘီးမောင်း စနစ်ပဲ ရပါတယ်။ ၂၀၀၀ စီစီ အင်ဂျင်မှာတော့ ၁၅၀ မြင်းကောင်ရေ ထုတ်ပါတယ်။ ဒီဇယ်ကို ဒီဖိုးဒီ အင်ဂျင်ကို သုံးထားပါတယ်။ တစ်ချို့သော ရတ်ဖိုးကားတွေဟာ အန်တီ လောခ့် ဘရတ် စနစ်၊ လျှပ်စစ် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှု၊ လေအေးပေးမှု။ ဒရိုင်ဘာ ထိုင်ခုံ ထိန်းချုပ်မှု၊ စပီကာ (၆) လုံး၊ ပါဝင်ဝင်းဒိုးစတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၁၃ ကနေ နောက်ပိုင်းထုတ်တဲ့ ကားတွေမှာ ကားအပြင်ဖက် ဒီဇိုင်းက လုံးဝ ခရာဇ် အိုဗာကား ပုံစံကို ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ရှေ့မော်ဒယ်တွေနဲ့ လုံးဝ ကွာခြားသွားပြီး ဒုတိယမျိုးဆက် ရတ်ဖိုး က ဟွန်ဒါ စီအာဗီနဲ့ ဆင်ပြီး အတွင်းခန်းက အပြင်က ကြည့်ရင် သေးငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ ကွန်ပတ် ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ အတွက် လူ(၅) ယောက်ကို ကောင်းကောင်း ၀င်ဆန့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းက ဒီဇိုင်းကလည်း အဆင်မြင့်ပါတယ်။ အပြင်ဖက် အနောက်မှာ အန်တီနာတွေပါဝင်ပြီး နောက်ဘီးအပိုအတွက် ကာဗာတပ်ဆင်မှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ မှန်ကာတွေ လည်းပါဝင်ပါတယ်။ မှန်အနက်တွေကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ခရူဇာ အသေးစားလေးတွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
စပေါ့စ်ဗားရှင်းတွေမှာ တော့ ကားအရှေ့ကွန်ရက် သံဇကာ၊ ခေါင်းမိုး စင်၊ ငွေရောင် စပေါ့စ် ပန်ဒယ်နဲ့ ငွေရောင် ဘန်ဘာ၊ စပေါ့ ဖိုက်ဘာ ထိုင်ခုံတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ ရွေးချယ်နိုင်မှု အနေနဲ့ အလိုင်းဝှီး၊ ဆန်းရု၊ သော့မဲ့၊ စံနှုန်းဖြစ်တဲ့ ၁၆ လက်မရှိတဲ့ ဘီးတွေ၊ ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ ဘီးတွေကိုတော့ လေးဘီးမောင်း စနစ်ပါရှိတဲ့ ကားတွေမှာ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ရစ် ပြည်တွင်း ဈေး အနေနဲ့ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကို ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကနေ ၁၈၀ ကျပ်သိန်းလောက်ကြားတွင် ရနိုင်ပြီး ၂၀၀၂ နဲ့ ၂၀၀၃ လောက်ကို ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော်လောက် ရှိပါမယ်။ ၂၀၀၆ ကတော့ ကျပ်သိန်း ၃၀၀ လောက်ကနေ ကျပ်သိန်း ၄၀၀ နီးပါးလောက်မှာ ရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ရိူးရွန်တွေနဲ့ ကားကုမ္ပဏီတွေမှာ ၀ယ်ယူနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း ရှိ အိမ်စီးကားများ အနေနဲ့ ဓာတ်ဆီ ၁၈၀၀ စီစီရှိတဲ့ တိုယိုတာ ရတ်ဖိုးလေးတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး မန်းလေနဲ့ အခြား မြို့ပြင်ကား စီးနင်းမှုတွေ အတွက်ကတော့ ဒီဖိုးဒီ အင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၀ စီစီဒီဇယ် အင်ဂျင်တွေကို ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော် အသုံးပြုမှု အတွက် လေးဘီးယက်စနစ်ကားကိုမှာ နှစ်ဘီးစနစ်ကို ပြောင်လဲသုံးနိုင်တဲ့ ရတ်ဖိုးမော်ဒယ်တွေကို ရွေးချယ် သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။